Tartankii aan la galay Cristiano Ronaldo wuxuu kusii jiri doonaa maskaxda dadka” – Lionel Messi | Hangool News
(Manchester) 15 Jan 2020. Kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi ayaa sheegay tartankii kala dhexeeyay Cristiano Ronaldo waayihiisii Real Madrid ee dalka Spain aysan waligeed ka baabi’i doonin maskaxda dadka.
Dhinaca kale Kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Argantina Lionel Messi ayaa tilmaamay in qof walba ku raaxeystay sannadihii la soo dhaafay.
Cristiano Ronaldo iyo Lionel ayaa ku soo wada guuleystay sanadihii lasoo dhaafay dhamaan abaal-marinada shaqsiyadeed oo ay ugu muhiimsanaayeen FIFA The Best iyo Ballon d’Or, xilligii uu xiddiga reer Portugal ku sugnaa kooxda Real Madrid inta u dhaxeeysay 2009 ilaa iyo 2018, marka lagu darro in ay xilli kasta ahaayeen kuwo rikooro jabiya iyo tartankii u dhaxeeyay labadooda oo dhowr sano halkiisa ka sii socday.
Intii uu Cristiano Ronaldo la joogay Real Madrid, wuxuu dhaliyay xiddiga reer Portugal 450 gool, 438 kulan uu u ciyaaray, halka Lionel Messi uu dhaliyay 472 gool, 476 kulan uu u ciyaaray kooxdiisa Blaugrana.
Haddaba sida laga soo xigtay shabakada caalamiga ah ee “Goal” Lionel Messi ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Tartankii aan la galay Ronaldo? Wuxuu ahaa tartan qaas ah, weligiisna wuu sii jiri doonaa, sababtoo ah wuxuu socday dhowr sano, marka lagu daro inaan u ciyaarnay labo kooxood oo aad loo dalbado ee ah Real Madrid iyo Barcelona, kuwaasoo loo arko kuwa ugu fiican adduunka”.
“Tartanka wuxuu ahaa mid inaga dhexeeyey sanado badan, waxaan u maleynayaa inuu weligiis jiri doono, tartanka inoo dhaxeeyay wuxuu ahaa mid aad u fiican, waxaana u maleynayaa in ay dadku ku riyaaqeen, ha ahaato taageere Barcelona, ama Real Madrid ama koox kale ah”.
“Sida iska cad, markii uu Cristiano Ronaldo joogay Real Madrid, kulamada El Clásico had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa Xiiso Badan”